Anyị na-emecha Nnukwu Ihe Nlele | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara17 CanakkaleAnyị na-emecha nnukwu Project n'isi
Anyị na-emecha nnukwu Project n'isi
08 / 03 / 2020 17 Canakkale, General, hyperlinks, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Mịnịsta na-ahụ maka njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan nke akpọrọ "Anyị ji rụchaa ọrụ ebido ebido" na mbipụta nke March 2020 nke akwụkwọ akụkọ Raillife.
Onye chepụtara Minista
Dị ka ọkà ihe ọmụma, Isaac Newton kwuru; kama iwu àkwà mmiri, a na-ahapụ ndị mmadụ naanị n'ihi na ha na-ewu mgbidi. Anyị na-ewu àkwà mmiri dịka obi anyị anaghị anabata owu ọmụma a. Anyị na-ejikọ kọntinent ọzọ.
Anyi na-aga n’iwu na 1915 Çanakkale Bridge na agba oso.
Anyị tinye akara anyị n’okpuru otu nnukwu ọrụ nke mba anyị.
Afara 1915anakkale 2, nke bụ ihe ọhụrụ gafere na Ngabiga Bosphorus, ga-abụ ntanetị ogologo nkwụsị na-anọte aka na ụwa na etiti ya na ọkara abụọ na narị abụọ na iri abụọ.
N'ime nnukwu ọrụ a, anyị ekpuchila akụkọ historyanakkale na nkọwa nke àkwà mmiri anyị. Na-anọchi anya ọnwa 3 nke ọnwa nke atọ, ogo anyị ga-adị mita 18.
N'ime ọrụ anyị, nke nwere mmetụta miri emi banyere gburugburu ebe obibi, anyị na-eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ anyị iji gbochie mmerụ ihe ndị dị n'oké osimiri anyị.
Anyị anaghị ewepu mgbaghara, anyị na-aga n’ụzọ anyị site na itinye ihe niile anyị na-eme, anyị na-enyekwa otu n’ime ọrụ ụwa ole na ole n’ọrụ gị.
Anyị na-arụzu ọrụ a tụrụ anya ya. Ogologo oge tupu oge nkwekọrịta ...
Anyị dị mpako, maka na anyị na-arụ ọrụ maka ọha na eze, anyị na-eri nri ọha na eze.
Mgbe anyị na-ejere ndị anyị ozi, Mehmetçi na-ejigide ntụkwasị obi ókèala na nchekwa ókèala nke ala anyị na Idlib. Ọ na-ewere usoro niile dị mkpa na Idlib, Libya, iji mebie aka agbatị megide iguzosi ike n'ezi ihe nke ala nna ya. O di nwute, na njedebe nke ọnwa gara aga, ndị dike 33 nke Mehmet Mehmet nwụrụ n'ihi okwukwe dị ala n'ihi mwakpo dị ala nke ndị agha na Idlib, Syria. Achọrọ m ebere sitere n’aka Allah nye ndị nwụrụ n'ihi okwukwe anyị na ịgwọ ndị merụrụ ahụ ngwa ngwa. Echefukwala na, site na nkwado nke mba anyị, a ga-enye ihe ndị a na-aghọ aghụghọ mmeghachi omume dị mkpa.
Ekpere anyi na Mehmetciks…
Mgbe ụwa na-alụso nsogbu ahụ ọgụ, anyị na-emejuputa nnukwu ọrụ ahụ
Minista Yıldırım: Anyị malitere ọrụ 9 na İzmir na ọnwa 11
Minista Binali Yıldırım na-ekwuputa oru ngo na Railroad
O mere ihe ojoo nke oma na Havaray
Binali Yıldırım: Anyị ga-emecha ọrụ 2013 na 3!
Bülent Arınç kwupụtara 100 Project maka 100 Bursan
Minista Yıldırım kwuru na anyị agwaghị ndị anyị ihe ọ bụla anyị na-agaghị emeli
3. kwuru na Crazy Project maka ọdụ ụgbọ elu
Canalioğlu 61 chetara ọrụ ahụ
Ụlọ ọrụ Sirkeci na-eche maka Ụlọ Ọhụrụ ahụ na Echiche Obere (Video)
Minista Prime Minister Yıldırım 4 kwadoro oru ngo
Mayor Yavaş ga-ezute ọrụ 100 na ndị isi obodo
Yahya Kaptan keere òkè maka ọrụ anyị a na-akpọ Yok No Platform Hep
Yenişehir Osmaneli Egwu Mgbapu Ozo nke Mbido Ogologo oge
Alstom Foundation iji kwado 25 oru ngo ohuru n’uwa nile
Ighafe Istanbul Bosphorus
Ndi otu Hyroene nke Iro Coronavirus di na Work
“Totaba na Jenụwarị gara aga n’obodo m na-ekpochapụghị”
Nkwado ulo maka ndi oru ahuike sitere na Izmir Metropolitan!
İBB gbara akwụkwọ maka Oge nke abụọ megide Kanal Istanbul Project
Oge A na-arụ ọrụ ọgwụ na Ankara gbanwere
Akwụghachila Ọrụ Mgbapụta Commerzụ ahịa na ọdụ Bursaray!